ညီနေမင်း: Live CD နဲ့ CD ပေါ်က window ကို Run ပြီး သုံးကြည့်ရအောင်
Live CD နဲ့ CD ပေါ်က window ကို Run ပြီး သုံးကြည့်ရအောင်
တန်ဖိုးရှိတဲ့ Live CD ကို မသိသေးတဲ့သူတွေ အတော်များပါတယ် . ဒီအတွက် ဒီပို့စ်ကို ရေးဖြစ်တာပါ . ဒီအကြောင်းကို ရေးဖို့ စိုင်းပြင်းနေတာ ကြာပါပြီ . အခုတော့ မထူးတော့ပါဘူးဆိုပြီး ရေးပေးလိုက်တာပါ . ဖိုင်တင်ရတာ အခုတစ်လော သိပ်အဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေတယ် . အလုပ်က များနေတာနဲ့တင် ပြီးနေတာ . အခုတော့ မျက်စိမှိတ်ပြီး တင်ပေးလိုက်ပါတယ် . ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် computer သများများအတွက် အလွန်အမင်း အရေးပါနေလို့ တိုက်တွန်းလိုက်တာပါ . .
ဘာ့ကြောင့် ကျွန်တော်တို့ Live CD ကို crazy ဖြစ်ရလဲဆိုတာကို အရင်ဦးဆုံး ပြောပြပါ့မယ် . ကျွန်တော်တစ်ခု မေးချင်ပါတယ် . ကွန်ပျူတာ HDD တစ်ခုမှာ အပိုင်း (၂) ပိုင်း (C:, D:) ဆိုပါတော့ဗျာ . တစ်ခါတစ်လေမှာ အောက်ပါ ပြဿနာများ တက်လာမယ်ဆိုပါစို့ .. ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ ?????
window တင်တယ်ဗျာ . partition ပိုင်းတဲ့ အဆင့်ကိုမရောက်ပဲ HDD ကို မတွေ့ဘူးလို့ချည်း ပြောနေတယ်ဆိုပါစို့ . (thailand မှာ မြန်မာတွေဆိုရင် ညစ်တာ တစ်ခုရှိတယ် . ဘာလဲဆိုရင် Computer တစ်လုံးကို ကုမ္ပဏီကနေ ၀ယ်လိုက်တယ် ကုမ္ပဏီက service သမားတွေက ညစ်ပတ်တတ်တယ် . ဘယ်လို ညစ်ပတ်တာလဲဆိုရင် HDD တစ်လုံးကို ဘယ်နှစ်လ ကြာရင် window ပြုတ်ကျမယ် . အတော်အသင့်နားလည်တဲ့ သူဆိုရင် window ပြန်တင်မယ် . အဲ့လိုအချိန်မျိုးမှာ . window တင်လို့မရအောင် program တစ်ခုခုနဲ့ ပိတ်ထားလို့ရပါတယ် . window တင်တိုင်း partition ပိုင်းတဲ့အဆင့်အထိကို မရောက်အောင်ပေါ့ . partition အဆင့်ရောက်တိုင်း error ပဲ ပြပြီး အပြာရောင် screen ပဲပြနေမယ် ) (Computer တစ်လုံးဝယ်တိုင်း window တင်ခ 800ဘတ် ပေးရပါတယ် . မပေးလို့မရပါ)
နောက်တစ်ခုက HDD တစ်လုံးထဲက window ကို အသုံးပြုနေရင်းနဲ့ virus ရဲ့ တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ၀င်းဒိုး ပြန်တင်ချင်တယ် . ဒါပေမယ့် virus က ၀င်းဒိုးမတင်တဲ့ HDD အပိုင်းတစ်ခုထဲမှာ ၀င်ခိုနေတယ်စိုပါစို့ဗျာ . အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်မလဲ ... C: ထဲမှာ window တင်ထားတယ် . D: ထဲမှာ Data တွေ သိမ်းထားမယ် . C: ကို window ပြန်တင်ပေမယ့် . D: ထဲမှာ ဗိုင်းရပ်စ် ရှိနေတဲ့အတွက် တစ်ခုခုတော့ ပြဿနာပေးမှာပဲ . အဲ့လိုအချိန်မျိုးမှာ ဘယ်လိုလုပ်သင့်လဲ ???
နောက်တစ်ခုက window တစ်ခုကို အသုံးပြုနေတဲ့ အချိန်တုန်းက File တွေ Data တွေကို မေ့ပြီးတော့ desktop မှာ သိမ်းထားမိမယ် . ဒါမှမဟုတ် C: ထဲမှာ သိမ်းထားမိတယ် . တင်ထားတဲ့ window က C: ထဲမှာ သိမ်းထားမိလိုက်တယ် . window ကလဲ လုံးဝဖွင့်လို့မရတော့ဘူး . window ပြန်တင်ရင်လဲ C: ထဲမှာရှိတဲ့ file တွေက ပျက်သွားမယ် . ဒီပြဿနာကို ဖြေရှင်းဖို့ ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ...
ကျွန်တော် အကောင်းဆုံး အကြံပေးချင်တာက နံပါတ်(၁) ပြဿနာကိုဖြစ်စေတဲ့ C: အပိုင်းကို Live CD ကို အသုံးပြုရင်း Formatting လုပ်ပစ်လိုက်လို့ရပါတယ် . နံပါတ်(၂) နဲ့ (၃) ပြဿနာကို ဖြေရှင်းဖို့ကတော့ Live CD ကို အသုံးချပြီး ဖိုင်တွေကို Flash drive ထဲကို copy ကူးထည့်ထားလိုက်ပါ ..
Live CD နဲ့ ဘာလုပ်လို့ရလဲ .
(၁) ဖိုင်တွေကို back up လုပ်ယူနိုင်ခြင်း
(၂) C:/ D: (HDD: တစ်ခုလုံး) ထဲမှာရှိတဲ့ virus တွေကို Live CD မှာပါတဲ့ kaspersky 2009 ကို အသုံးပြုပြီး စစ်လို့ရခြင်း . စတဲ့ ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းဖို့အတွက် Live CD က အကောင်းဆုံးပါ .
Live CD က ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ
Live CD ဟာ window ကို HDD က window ကို run စရာမလိုပဲ ..
CD နဲ့ Ram နှစ်ခု ပူးပေါင်းပြီး Window တစ်ခုကို တည်ဆောက်ထားတာ
ဖြစ်တဲ့အတွက် HDD ထဲမှာရှိတဲ့ Data မှန်သမျှကို အရယူနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် . ကျွန်တော်တို့အတွက် Live CD တစ်ချပ်ဟာ အရမ်းကို အဖိုးတန်တဲ့ နည်းပညာတစ်ခုပါ . ကွန်ပျူတာသမားတိုင်း တစ်ချပ်တော့ မဖြစ်မနေ ဆောင်ထားသင့်တာပါ . ဒီလိုတန်ဖိုးရှိတဲ့ အသိပညာတစ်ခုကို ကျွန်တော်လက် ဆင့်ကမ်းလိုက်ပါတယ် . အလုပ်မအားတဲ့ကြားထဲကနေ တင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် တစ်ချို့ ပို့စ်လေးတွေ ဖြေပေးတာ နောက်ကျတာကိုတော့ သီးခံခွင့်လွှတ် ပေးစေချင်ပါတယ် . ကျွန်တော် အခု live CD ကို ရှင်းပြတဲ့အထဲက HDD တစ်လုံးကို service လုပ်တဲ့ သူတွေ ဘယ်လိုမျိုး program ကို အသုံးပြုပြီး သူ့သတ်မှတ်ရက်အတွင်း window ပြုတ်ကျသွားအောင် ဘယ်လို လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ မေးခွန်းကိုတော့ မမေးကြဖို့ ကြိုတင်တောင်းပန်ထားပါရစေ . ကျွန်တော် အဲ့ဒီ့အဖြေကိုတော့ ဖြေပေးမှာမဟုတ်ပါဘူး . သိချင်ရင် google ကနေပဲ ရှာကြည့်ပါ .
(၁) Live CD ကို CD Room ထဲကို ထည့်ပြီး ကွန်ပျူတာကို restart ပေးလိုက်ပါ .
(၂) live CD စ run နေပါပြီ .
(၃) live CD အလုပ်လုပ်ဖို့အတွက် ခဏတော့ စောင့်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ် .
ကျွန်တော် live CD အလုပ်လုပ်ပုံကို movie ရိုက်ပြီး တင်ထားပေးပါတယ် . အဲ့လိုမျိုး မလုပ်ဖူးတော့ အသံတော့ သိပ်မရဲဘူးဖြစ်နေတယ် . ကြိုးစားပြီး နားထောင်လိုက်ပါ . ကျွန်တော့် ကွန်ပျူတာမှာ live CD ထည့်ပြီး အလုပ်လုပ်ပုံကို movie နဲ့ ရှင်းပြထားပါတယ် . အောက်မှာ ယူလိုက်ပါ .. ဆိုက်မှာ ကြည့်ရတာ အဆင်မပြေသူများအတွက် movie file ကိုပါ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် .
Download Live CD iso
Downloda mediaifre >> Part (1) ၊ Part (2) ၊ Part(3) ၊ part(4) ၊ Part(5) ၊ Part(6)
Posted by ညီနေမင်း at 7:18 AM
Labels: Answers, Operating help
စေတနာရှင် October 18, 2009 at 2:02 AM
window ပြန်တင်မယ် . အဲ့လိုအချိန်မျိုးမှာ . window တင်လို့မရအောင် program တစ်ခုခုနဲ့ ပိတ်ထားလို့ရပါတယ် . window တင်တိုင်း partition ပိုင်းတဲ့အဆင့်အထိကို မရောက်အောင်ပေါ့ . partition အဆင့်ရောက်တိုင်း error ပဲ ပြပြီး အပြာရောင် screen ပဲပြနေမယ်
ကျွန်တော့်စက်မှာ အဲဒီလို ဖြစ်နေတယ် အစ်ကို၊ windows တော့ မကျသေးပါဘူး၊ ကျွန်တော် Windows XP အခွေနဲ့ စမ်းပြီး Boot လုပ်ကြည့်တာပါ၊ အဲဒါကို ပြန်ဖြည်တဲ့နည်းရှိလားဟင်၊
MAP76 November 25, 2009 at 7:16 PM
thankalot for your kindness.it is very useful for every computer user.
သီဟဇော် November 25, 2009 at 8:35 PM
live cd ရဲ့ အကျိူးကျေးဇူးက တော်တော်ကြီးမားပါတယ်ခင်ဗျာ....
live cd က တော်တော်ကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာ...